कसलाई मिस गर्दै छन् त प्रदिप ? - Sutra TV Sutra TV
नायक प्रदिप खड्कालाई चलचित्र प्रेम गीतले एउटा नाम र उचाईँ प्रदान गरेको छ । उनी नेपालका उत्कृष्ट नायकको सुचीमा पर्छन् । तर उनको पछिल्लो चलचित्रको ब्यपार हेर्दा उनले प्रेम गीत र प्रेम गीत २ ले दिएको सफलता र क्रेज जोगाउन नसकेको देखिएको छ ।
‘रोज’ ‘लभ स्टेसन’ लगायतका चलचित्रले आशातित सफलता नपाउँदा प्रदिपको करियर नै धरापमा पर्न लागेको थियो । तर पनि उनलाई फिल्मको प्रस्तापको कुनै कमी थिएन । उनका घोषणा भैसकेका केही फिल्म अझै फ्लोरमा गएका छैनन् । तर, प्रदिप यतिबेला आफुलाई स्थापित बनाउन सफल फिल्म प्रेम गीत को दोश्रो सिक्वेल प्रेम गीत ३ को तयारीमा ब्यस्त छन् । आफ्नो फिल्मी करियर् अब प्रेम गीत बाट नै उकालो लाग्ला भन्ने उनको सोच होला ।
प्रदिप फिल्मको तयारी सँगै बिभिन्न प्रोडक्टको ब्रान्ड एम्बासडर बनेर प्रोडक्टको बिज्ञापन पनि गरिरहेका छन् । उनी आफु एम्बासडर बनेका कम्पनीको प्रचार आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम मार्फत गरिरहेका हुन्छन् । कम्पनी र प्रोडक्ट मेन्सन गरेर उनले गरेको एक इन्स्टाग्राम पोस्टमा अमेरिकन गायक फोर्ट माइनरको गीतको लिरिक्स समेत समावेश गरेका छन् जहाँ उनले कसैलाई मिस गर्दै उनी कतै जादाँ सधैंको लागि आफु बाट गएको हो जस्तो महसुस हुने बताईएको छ । उनले राइनो लेदरको प्रमोसन गर्दै आफ्नो इन्स्टा स्टोरीमा यो शब्द अङ्रेजीमा राखेका छन् ।
सोही फोटो इन्स्टाग्राममा राख्दै आफु कसैलाई पर्खिरहने बताएका छन् । आखिर प्रदिप कसलाई यती प्रेमले धैर्यतापुर्वक पर्खिरहेका छन् ? नेपाली फिल्म वृतमा उनको नाम नायिका जसिता गुरुङ सँग जोडीएको छ । उनको पर्खाईँ जसिताकै लागि हो या अरु कसैको लागि हो ? यसको जवाफ त प्रदिप सँगै होला ।
‘लभ यु हमेशा’को ‘यो हावा किन चल्छ’ सार्वजनिक
आमिर खान बने ‘लाल सिंह चड्ढा’
‘चपली हाइट ३’को शुभसाइतमा कन्फ्युज स्वस्तिमा
प्रियंकाको निर्देशनमा ‘मेरै लाउरे’
बिकिनीमा हट एलिजा
‘सेल्फी किङ’मा स्टार कमेडियन विपिन